The Rohingya News Bank : IDP
Showing posts with label IDP. Show all posts
Myanmar (International Christian Concern) – Since the February 1 military coup that deposed Aung San Suu Kyi’s democratically elected civilian government, infighting between the Burmese military and pro-democracy groups has reachedaboiling point. The fighting has forced many Burmese people to flee their villages out of fear for their lives, leading toasignificant spike in the number of internally displaced people (IDPs) in the country.
Labels: 2021, AID, Article, en, Free Burma Rangers, ICC, IDP, News
Labels: 2020, Article, Buddhists, en, IDP, Kyaukphyu, Muslims, Rakhine State, Rohingya, U Win Myint
စစ်တွေမြို့ရှိ ရိုဟင်ဂျာ IDP စခန်းတွင် မီးလောင်
စစ်တွေ ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ရှိ IDP ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး နှစ်လအရွယ်ကေ လး တစ်ဦး သေဆုံးပြီး တစ်ဦး ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့ ည ၆ နာရီခန့်တွင် အုန်းတော IDP ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ချက်ပြုတ်နေရာမှ မီးစ တင်လောင်ကျွမ်းပြီး အဆောင် ၆ ဆောင် ပြာကျသွားသည်ဟု ဒေသခံများက Rohingya Today သို့ပြော သည်။
Labels: 2020, IDP, mm, စစ်တွေမြို့, ဒုက္ခသည်စခန်း, မီးလောင်မှု, သတင်း
IDP စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်နေရာချထားပေးရာမှာ အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေ သလို၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ထပ်မံကျူးလွန်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတခုက သတိပေးလိုက်တာကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအိမ့်သန္တာထွန်းက ပြောပြပေးပါမယ်။
Labels: 2020, DHRP, IDP, mm, ဗွီအိုအေ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, နေရင်းဒေသ
“When I Think About it, I Get Heart Sick”
-RFA spoke to Rohingya Muslims in displacement camps in Myanmar’s Rakhine state. They are among the 120,000 Rohingya who were forced from their homes after communal violence between Buddhists and Muslims in 2012 left more than 200 people dead.
Labels: 2020, en, IDP, Myanmar, Rakhine, Rohingya, Sittwe, Video
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဖိလစ်ပိုဂရမ်ဒီ တို့ ၂၀၁၉၊ မေ ၂၃ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ်
UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဖိလစ်ပိုဂရမ်ဒီ ဟာ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူတွေ ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ရခိုင်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ပိတ်သိမ်း နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2019, Filippo Grandi, IDP, mm, RFA Burmese, UNHCR, ပိတ်သိမ်းရေး, သတင်း
By Noung Khaing Aung , 15th May 2019
U Than Naing, Rakhine State Member of Parliament has said that he has engaged with the aid organizations from home and abroad to urgently assist IDPs from Rathidaung before rainy season.
Labels: 2019, en, IDP, MP, Narinjara, News, Rakhine
စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၃သောင်းကျော်အထိ ရှိခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ AA ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရတပ်မတော်တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ ကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသူ လူဦးရေ ၃၁၀၀၀ ကျော်အထိ ရှိခဲ့တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးအန္တ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနက ဦးစီးအရာရှိ ဦးရဲမင်းဦးက RFA ကို ဒီနေ့ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, IDP, mm, ဒုက္ခသည်, ဘူးသီးတောင်, ရက္ခိုင့်တပ်မတော်, သတင်း, ကျောက်တော်မြို့
ဆွေးနွေးဖလှယ်မှု ပြုလုပ်ဖို့ ကုလ အထူးကိုယ်စား လှယ် မြန်မာကိုတိုက်တွန်း
အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ဖလှယ်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုမို အင်အားကောင်းစေလိမ့်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်ကနေ ၁၉ ရက်နေ့ အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် အပြီးမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ အခါမှာ မစ္စ ခရစ်စတီး ဘာဂနာက အခုလို ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ဟာ လူသားအားလုံး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းတွေ လက်လှမ်းမီဖို့ အတွက် အဓိက ကျတဲ့ အကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် မရှိရင် ကလေးတွေ အတွက် ကျောင်းမတက်နိုင်သလို ဆေးရုံသွားရာမှာလည်း အခက်အခဲ ရောက်မယ်၊ ဒုက္ခရောက်မယ်၊ ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဟာ အင်မတန် အရေး ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ရခိုင် အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, IDP, mm, VOA Burmese, ကုလသမဂ္ဂ, ဒုက္ခသည်, ရခိုင်
UN chief calls for Myanmar's cooperation to return Rohingyas.
Labels: 2019, en, IDP, Iran, IRNA, Myanmar, News, Rohingya, UN Chief
စစ်တွေမြို့ရှိ ရိုဟင်ဂျာ IDP စခန်းများတွင် အာဏာ ပိုင်များက “ဘင်္ဂါလီ” လူမျိုး အမည်ဖြင့် အိမ်ထောင် စုစာရင်းများ ထုတ်ပေးနေ
(ဓါတ်ပုံ - Asanka Brendon Ratnayake - Anadolu Agency)
အောင်ဇံဝေ၊ Jan 07, 2019 Rohingya Today
စစ်တွေ ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့အတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာများ နေထိုင်သည့် IDP စခန်းများသို့ အာဏာပိုင်များ သွားရောက်၍ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမရှိသည့် မိသားစုများအား ရိက္ခာထုတ်လက်မှတ်များမှ အချက်အလက် များကို သုံး၍ “ဘင်္ဂါလီ” လူမျိုးအမည်ဖြင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း အသစ်များ ထုတ်ပေးပြီး၊ မိသားစုဓါတ်ပုံများ လည်း ရိုက်ယူလျက်ရှိသည်။
Labels: 2019, IDP, mm, Rohingya, RT, စစ်တွေ
( 04.12.2016 ) Myanmar: Abuse of human rights ( Financial Express )
Muhammad Zamir,Published : 04 Dec 2016
The Rohingyas are again under attack in Myanmar. The New York Times has correctly observed that "Myanmar has long persecuted the country's Rohingya Muslim minority, denying it basic rights to citizenship, to marry, to worship and to education." Reuters has reported from Yangon that more than 1,000 homes have been razed in Rohingya villages duringamilitary 'counter-insurgency' lockdown (between October 22 November 10). This estimate is based on the analysis of satellite images which Human Rights Watch released on November 21. Latest figures indicate that up to 30,000 people have been displaced in Myanmar's Rakhine state - half of them over the course of the second and third weeks of November.
Labels: 2016, en, IDP, MDW, News, President Office, UNHCR, WFP, Yanghee Lee, Zaw Htay